मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षमा डा. भगवान कोइराला नियुक्त, पदबहालीअघि नै चुनौती सुरु – Health Post Nepal
मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षमा डा. भगवान कोइराला नियुक्त, पदबहालीअघि नै चुनौती सुरु
२०७६ कार्तिक १७ गते १४:४८
यी कलेजले पाउने भए डिएम/एमसिएच कार्यक्रम सञ्चालन अनुमति, यस्ता छन् काउन्सिलका १४ निर्णय
डा. भगवान कोइराला भन्छन्- मिर्गौलाले काम गर्न छोडेछ, शल्यक्रियापछि ठिक छु
नेपाल सरकारले प्रा.डा. भगवान कोइरालालाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. कोइरालालाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । गत जेठमा प्रा.डा. धर्मकान्त बास्कोटाको पदावधि सकिएसँगै करिब ५ महिनादेखि काउन्सिलको अध्यक्ष पद रिक्त थियो ।
डा. कोइराला र डा. बास्कोटा दुवै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि सिफारिसमा परेका थिए । भिसीका लागि प्रमुख दाबेदार मानिएका डा. कोइरालालाई काउन्सिलमा लगिएसँगै अब भिसीमा काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष डा. बास्कोटाको सम्भावना प्रबल बनेको छ ।
पेसागत मात्र नभई प्रशासकीय छविसमेत कुशल बनाएका डा. कोइराला नेतृत्वमा आएसँगै काउन्सिलले आमूल सुधार ल्याउन सक्ने विश्वास गरिएको छ । यद्यपि, डा. बास्कोटाको कार्यकालमा पनि काउन्सिलमा उल्लेखनीय सुधार भएको मानिँदै आएको छ ।
राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा आयोगको गठनसँगै काउन्सिलको भूमिका निकै खुम्चिएको छ । मेडिकल कलेजहरुको नियमन तथा नियन्त्रणसम्बन्धी अधिकारहरु आयोगमा गएका छन् । यद्यपि, चिकित्सकको आचारसंहिता, लाइसेन्सिङ, सिपिडीलगायत अधिकार काउन्सिलमा छन् । नक्कली डाक्टरको बिगबिगीलाई नियन्त्रण गर्नु काउन्सिलको चुनौती बन्दै आएको छ । डा. कोइरालाले उल्लेखित सबै क्षेत्रमा कुशल नेतृत्व दिँदै आमूल सुधार ल्याउने अपेक्षा सबैको छ ।
काउन्सिलमा मनोनीत अध्यक्ष, निर्वाचित उपाध्यक्षसहित १९ सदस्यीय कार्यसमिति रहने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारबाट नियुक्त एक रजिस्ट्रारले सदस्य–सचिवका रुपमा काम गर्ने प्रावधान छ । काउन्सिलमा अध्यक्ष र अन्य सात सदस्य नेपाल सरकारबाट मनोनीत हुन्छन् । मनोनीत सदस्य तथा पदाधिकारीका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
करिब ५ महिनापछि अध्यक्ष पाएको काउन्सिलमा रजिस्ट्रारसहित ५ सदस्य पदमा नियुक्ति हुन अझै बाँकी छ । रजिस्ट्रार पद केही दिनअघि मात्र रिक्त भएको हो । उपभोक्ताका तर्फबाट नियुक्त हुने सदस्य पदमा भीमबहादुर चन्दको पदावधि सकिएको ८ महिना पुगिसकेको छ । अन्य चार सदस्य मेडिकल समूहबाट डा. चन्दा कार्की र डा. कृष्ण अधिकारी तथा डेन्टल समूहबाट डा. प्रकाश पराजुली र डा. सुदीप आचार्यको कार्यकाल सकिएको पनि ७ महिना बितिसकेको छ ।
पहिलो पाइलाबाटै चुनौती, तर धेरै छन् आशा गर्ने ठाउँ
काउन्सिलमा हाल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र रजिस्ट्रारको समेत कार्यकक्षमा युवा चिकित्सक संघ नेपालको ताला झुन्डिएको छ । संघले कानुनविपरीत चल्ने ४ मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्नुपर्नेलगायत माग राख्दै शुक्रबार काउन्सिलमा तालाबन्दी गरेको थियो । सरकारको निर्देशन र विद्यार्थीको महिनौँको जायज आवाजको अवज्ञा गर्दै अवैध असुलिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता नगर्ने चितवन, गण्डकी, नेसनल र युनिभर्सल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्नुपर्ने माग संघको छ । यससँगै २३ कात्तिक (शनिबार) का लागि निर्धारित स्पेसलिस्ट लाइसेन्स परीक्षा प्रभावित हुने देखिएको हो । यस्तोमा एक–दुई दिनभित्रै संघलाई विश्वास दिलाएर ताला खोल्दै निर्धारित मितिमै परीक्षा सञ्चालन गर्नु डा. कोइरालासामु पहिलो चुनौती छ ।
डा. कोइरालाले आफूलाई योग्यतम चिकित्सकका साथै एक कुशल प्रशासकका रुपमा समेत प्रमाणित गरिसकेका छन् । डा. कोइरालाकै ड्रिम प्रोजेक्टका रूपमा स्थापित गंगालाल हृदयरोग केन्द्रलाई उनले स्थापनादेखि अब्बल मुटुरोग अस्पतालका रूपमा स्थापित गराउन कुशल नेतृत्व दिएका थिए । आइओएममा आएपछि पनि उनले छोटो समय टिचिङको जिम्मेवारी सम्हाल्दा आफूलाई अब्बल प्रशासकका रूपमा प्रमाणित गरेका थिए । टिचिङअन्तर्गतकै मनमोहन कार्डियो भास्कुलर सेन्टरको स्थापना र विकासमा पनि उनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । त्यसैले डा. कोइरालाले चुनौतीको कुशल व्यवस्थापन गर्दै काउन्सिललाई सही दिशा दिनेमा विश्वास लिन सकिन्छ । उनी चिकित्साशिक्षा आयोगको उपाध्यक्षका लागि समेत योग्यतम उम्मेदवार मानिएका थिए । तर, त्यतिवेला उनले इच्छा देखाएनन् ।
यस्तो छ काउन्सिलको गठनप्रक्रिया
काउन्सिलमा देहायका सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ :
(क) दर्तावाला चिकित्सकका रूपमा कम्तीमा २० वर्षको अनुभव हासिल गरेको र चिकित्सासम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त चिकित्सकमध्ये नेपाल सरकारबाट मनोनीत – अध्यक्ष
(ख) दर्तावाला चिकित्सकहरूले कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव हासिल गरेका दर्तावाला चिकित्सकमध्येबाट तोकिएबमोजिम निर्वाचन गरी पठाएको चिकित्सक एकजना – उपाध्यक्ष
(ग) अध्यक्ष, नेपाल चिकित्सक संघ – सदस्य
(घ) आधुनिक चिकित्साशास्त्रसम्बन्धी विषयमा अध्ययन हुने विश्वविद्यालय वा स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानका डिन वा शिक्षाध्यक्षमध्ये नेपाल सरकारबाट मनोनीत एकजना – सदस्य
(ङ) उपभोक्ताहरूमध्ये नेपाल सरकारबाट मनोनीत एकजना – सदस्य
(च) दर्तावाला चिकित्सकमध्ये तोकिएबमोजिम निर्वाचित चिकित्सक ८ जना – सदस्य
(छ) अध्यक्ष, नेपाल दन्तचिकित्सक संघ – सदस्य
(ज) दन्तचिकित्सकबाहेक चिकित्सासम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधिप्राप्त चिकित्सकमध्ये नेपाल सरकारबाट मनोनीत ३ जना – सदस्य
(झ) कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधिप्राप्त दन्तचिकित्सकमध्ये नेपाल सरकारबाट मनोनीत २ जना – सदस्य
Tags: डा. भगवान कोइराला, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, प्रा.डा. भगवान कोइराला